Ra'iisulwasaaraha cusub ee Itoobiya oo raaligalin bixiyay - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 2 Abriil 2018
Abiy Ahmed ayaa noqday Ra'iisulwasaare ka dib markii uu si lamafilaan ah isu casilay ninka uu badalay
Ra'iisulwasaaraha cusub oo khudbad ka horjeediyay xildhibaannada ayaa qiray in "dimuqraadiyadda curdanka ah" ee dalku ay horseeday in ay muwaadiniin dhintaan sannadihii u dambeeyay.
Ra'iisulwasaaraha ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay Eritrea kala shaqayso sidii loo xalin lahaa muranka u dhaxeeya labada dal iyada oo lawada xaajoonayo.
Isaga oo diiradda saaraya midnimada, qanaacada, caddaaladda iyo iscafintana, Ra'iisulwasaare Abiy wuxuu siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo qurbajoogta Itoobiyaanka ah ugu baaqay in laga wada shaqeeyo isafgarad qaran.
Dad badan ayuu ahmiyad gaar ah u leeyahay isbadalkani, sababtuna waxay tahay in Abiy uu ka soo jeedo qawmiyadda Oromada, gobolkaas oo ay mudaaharaadyo waawayn iyo degenaansho la'aan ka jirtay wakhtiyadii dambe.
Sucuudigu ma ku dhiiran karaa aqoonsiga Israel?
Waa kuma ninka Trump ku qancinaya in looga shubtay doorashada?
“Guddiga doorashada waxaa loo xushay dad dowladda Soomaaliya taageera”
"Magafeyaal" BBC uga warramay ganacsigaas khatarta badan
14 Nofembar 2020
Kim Jong-un oo sigaarka ku cabba fagaarayaasha balse dadkiisa ka mamnuucay
Abiy Axmed awood ma ku maquunin karaa Tigrayga?
Yaasmiin oo mar dhaawac ka badbaadisay Priyanka Chopra
Nin ay aad isugu dhawyihiin Trump oo ugu baaqay inuu aqbalo natiijada codbixintii Mareykanka